Magacyada & Sawirada Saraakiil lagu dilay Galgaduud oo la soo bandhigay - Awdinle Online
Magacyada & Sawirada Saraakiil lagu dilay Galgaduud oo la soo bandhigay
Gelinkii dambe ee Maanta ayaa maleeshiyaad hubeysan waxaa ay weerar jidgal ah ku qaadeen Gaari ay wateen Saraakiil ka tirsan Millateriga Soomaaliya, waxaana weerarkaas lagu dilay Saraakiil Ciidan iyo askar kale.
Ciidamada la weeraray oo ka tirsan Millateriga Soomaaliya ayaa ka baxay Xerada tababarka Hargaboobe ee degmada guriceel, hayeeshee maleeshiyaad hubeysan ay rasaaseeyeen, xilli ay marayeen deeganka cagfaroge oo u dhexeeya Guriceel iyo Ballanballe.
Weerarkaas ayaa wararka la helay waxaa ay sheegayaan in lagu dilay ilaa 6 Sarkaal halka la la’yahay Saddex Sarkaal, kuwaas oo dhawaan tababar macalinimo loogu soo geb-gabeeyay Xerada Ciidamada Millateriga ee degmada Guriceel.
Saraakiisha weerarkaas lagu dilay oo meydkooda la helay ayaa waxaa ay kala yihiin, Gaashaanle Dhagaqool Yuusuf, Gaashaanle Cabdi Guuna Guune, laba Xidigle Faarax Jaamac Colaad, Kabtan Shariif Cirro Maxamed, Gaashaanle Gaangul Xalane, Kabtan Siciid Xassan Faleey.
Sidoo kale waxaa jira Saraakiil Nolol iyo geeri intaba lagu la’ayahay, kuwaas oo Magacyadooda lagu sheegay, LabaXidigle, Qalbi Indha tag, Gaashaalne Cayroow Warsame Xassan iyo Kabtan Suldaan Dirir.
Wararka qaar ee la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Saraakiisha & Ciidamada ka tirsanaa Millateriga Soomaaliya loo dilay falal la xiriira aanooyin qabiil oo waayadii dambe ka jiray degaannada Dowlad goboleedka Galmudug.
Saraakiisha qeybta 21aad ee Millateriga Soomaaliya & Madaxda Galmudug weli kama hadlin weerarkaas, waxaana ciidamadii ku dhintay la geeyay degmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud.
Previous articleDagaal ka socda xaafad ka tirsan Magaalada Muqdisho
Next articleRag hubeysan oo saaka lagu toogtay Magaalada Muqdisho